हृदयलाई छोईजाने गीत (भिडियाे) - ConfuseNepal
वीपी प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ताले दिए राजीनामा, सबैबाट सहयोग भएकाले धेरै सिक्ने माैका मिल्योः सहप्रवक्ता श्रेष्ठ
पुर्व वृटिस आर्मि केवल बहादुरले परिवारको नाममा धरान पोजिटिभ समुहलाई राहत प्रदान गरे
डोनल्ड ट्रम्पलाई हराउँदै जो बाइडन विजयी
६ भाद्र २०७७, शनिबार ६ भाद्र २०७७, शनिबार कन्फ्युजनेपाल
भाद्र ०६, २०७७ – जुगौंदेखि पहाड जस्तै अटल अटल बसिरहेछु
वियोगका अथाह पीडा आँखाबाट धोईरहेछु
पीर पखाल्ने त्यही आँशु सुक्नुभन्दा अघि तिमी आऊ
मनको चरी दूर-देश कट्नुभन्दा अघि तिमी आऊ
अन्तत: प्रेम हुने चीज हो, गर्ने चीज होईन । गर्ने चीज हुँदो हो त, कोही मानिस किन यसमा असफल हुने थिए र ? मिलाई मिलाई सफल बनाई छाड्थे । प्रेमको भाग्यरेखा आफैं कोर्थे मानिसले । तर प्रेम हुने चीज भएकोले यो मानिसको नियन्त्रणभन्दा अलि पर छ । संयोगहरूको जोजनद्वारा यो निर्देशित छ । सायद यही विशेषता भएबाट प्रायशो: प्रेमहरू अतृप्त छन । अपूरो छन । अधूरो छन । फलत: अधूरो प्रेमका कथाहरू यत्रतत्र छन । अतृप्त प्रेमका व्याथाहरू जहाँकहीं छन । यद्धपि, बजारमा यही बिक्दो छ । यसैको भाउ चर्को छ । यो उदेकको कुरा हो । मानिसहरू अतृप्त प्रेमको तलवारले आफ्नै गर्धन छिनाल्न सधैं तत्पर छन ।
अझ गीत संगीतमा यसको स्थान व्यापक छ । अधिकांश गीत संगीत यही अतृप्त प्रेमको राग-आलाप बन्दै आएको छ । दर्शक स्रोताहरूको रोजाई पनि यही हुँदै हो ।
माथि सुरुवातमा उल्लेखित चार हरफहरू यस्तै अतृप्त प्रेमको आग्रह मिश्रित रोदन हो भन्दा फरक नपर्ला । यसमा प्रेमप्रतिको आशक्तिलाई जोडदार ढंगले अभिव्यक्त गरिएको छ । हरफहरू ‘यो रमाईलो मौसम…’ शीर्षक रहेको गीतको केही अंशहरू हुन । रमेश नामहाङको शब्द अनि बिक्रम राईको संगीत र स्वरमा बनेको यो गीत भर्खरै युट्यूव मार्फत पुनः रिलिज भएको छ ।
अहिले प्रस्तुतकर्ता वा सम्बन्धितले आफ्नै आधिकारिक च्यानल मार्फत रिलिज गर्ने प्रचलन छ । त्यही प्रचलन पछ्याउँदै यसका शब्दकार एवम् प्रस्तुतकर्ता रमेश नामहाङले आफ्नो आधिकारिक च्यानलबाट गीत रिलिज गरेका हुन । सरल शब्दलाई खेलाएर निक्कै गहन अर्थ अभिव्यक्त गर्न रुचाउँछन शब्दकार । यसमा उनी सफल छन । सामान्य शब्दहरूको ताकतमा गीतले हृदयको गहिराईसम्म स्पर्श गर्न सक्षम छ ।
अहिले पछिल्लो पुस्तामा देखिएको राम्रो प्रतिभा हुन बिक्रम राई । उनी ।गाउने मात्र होईन संगीत पनि आफै गर्न सक्छन । यो गीतमा उनले प्राण भरेरै संगीत गरेका छन भने उत्तिकै सशक्त ढंगले गाएका पनि छन । गीत यति श्रवणीय छ कि, एकपटकले सुन्ने धीत मर्दैन, पटक पटक सुन्न बाध्य गराउँछ ।
फणिन्द्र राईको संगीत संयोजन रहनु यो गीतको अर्को सशक्त पाटो हो । सो बिधाका दिग्गज हुनुको प्रभाव यस गीतमा प्रष्टै झल्किन्छ । संगीतको धून मात्रै पनि मिठो छ ।
गीतलाई युगल पोमो लिम्बुले निक्कै सुन्दर ढंगले भिडियोमा उतारेका छन । सम्पदा बानियाँ र अनिल थापाको जोडी गीतमा सुहाएको छ ।
इटहरीमा 'जाइरा'लाई लाखेको स्वागत
← बराह ग्रुपकाे २६ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा स्वास्थ सामग्री वितरण
च्याम्पियन्स लिगकाे फाइनल खेल आज हुँदै, बायर्न र पिएसजि बिच भिडन्त →
मंसिर ०४, २०७७ – वीपी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानका
मंसिर ०१, २०७७ – हातेमालो फाउण्डेशनको आयोजनामा नेपाल फोटो
कार्तिक २७, २०७७- क्यान्सर अर्थात अबुर्द रोग हाम्रो शरिरमा
कार्तिक २७, २०७७ – धरान १९ निवासी पुर्व वृटिस आर्मि केवल
कार्तिक २२, २०७७ – जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित
अमेरिकाको राष्ट्रपति पदका लागि डेमोक्रेट उम्मेदवार बाइडनलाई अग्रता कायमै
कार्तिक २२, २०७७ – अमेरिकामा सम्पन्न नयाँ राष्ट्रपतिका लागि
प्रदर्शन नगरिएको चलचित्र ‘झिल्के’ को कथा माथि ‘ बा…
धरानकी कोरोना संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहेको सबैको पर…
यस्तो छ चलचित्र छिरिङको टिजर...
मदन पुरस्कार गुठीले मदन पुरस्का २०७६ काे लागी...
प्रतिपक्षलाई २०४८ सालयताको हिसाबको फेरिस्ता ब...
प्राश्नाको नयाँ जन्म गीतले नयाँ जन्म पायो (भि...
Planet Gaming Zone
Get Your Royal Pass